On the rock: May 2014
Sai Htwe အမေရိကမှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တောင်ဝယ်စီးနိုင်တဲ. တရားဟောဆရာအတုတွေ ဘာသာရေးလုပ်စားနေတဲ.သူတွေ ရှိတယ်။ ဗမာဆရာတချို.လဲ ဒီလိုလုပ်စားနေတား ရှိတယ်။ သွားစစ်ကြည်.ပါ။ ဘယ်က၀င်ငွေတွေနဲ. တိုက်ဆောက် ကားဝယ် သိန်းဂဏန်းချမ်းသာနေသလဲ ဆိုတာ။
ခရစ်ယာန် သိုးသူခိုး ဆရာ များ အား လွန်စွာ မှ အံ့သြ၏။ အဲဒီ သိုးသူခိုး များသည် ဧဝံဂေလိ တရား အား မယုံကြည်သူ များ ထံ မဟော ပဲ ယုံကြည်သူ အသင်းတော် များ ၌ သာ ဝင်ဟော တတ်ကြ ကာ အသင်းတော် များ အား အပုပ်ချ မှ သာ ဧဝံဂေလိတရား ဟော တတ် ကြ သူ များ ဖြစ်သည် ။ဥပမာ MediaforChrist Saiaye ကဲ့ သို့ သော အဖွဲ့ များ ဆရာ များ ဖြစ်သည်။ အသင်းတော် များ စည်းလုံး တိုးတက် နေသည် ကို မနာလိုသူ များ ခြေထိုးသူ များ အား သတိရှိကြ ပါ။MLH
Nmai hti ai web link ( myen ni njaw ai hku masu hkalem da ai lam )
Nmai hti ai web link ( myen ni njaw ai hku masu hk...